Sonos One dib u eegis ku hadla, caqli badan lehna AirPlay 2 | Wararka IPhone
Hadliyayaashu waxay kujiraan qaab casri ah mahadhoodii soo ifbaxay ee loogu yeero "kuwa ku hadla caqliga badan" sida HomePod, Amazon Alexa ama Google Home. "MultiRoom" ama isku xirka laba sameecadood si loo abuuro nidaam sitikoyo ah waxay umuuqataa wax cusub, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in noocyada Sonos oo kale ah ay jireen mudo sanado ah. isla bixiya alaabtooda.
Anagoo ka faa'iideysaneyna cusbooneysiintii ugu dambeysay ee AirPlay 2 ay la timid alaabteeda, waxaan falanqeynay kuwa ku hadla Sonos One. Habka ugu sumcadda badan sumadda laakiin bixiya dhawaq tayo leh iyo astaamo alaabooyin yar oo ka mid ah qiimahoodu u dhigmi karo. Oo weliba waxay diyaar u tahay inay hesho Amazon Alexa iyo Google Assistant.
2 Ka xakamee taleefankaaga casriga ah
3 Tayada oo ah sumadda guriga
Iyada oo cabirkeedu yahay 161,5 × 119,7 × 119,7mm iyo culeyskeedu yahay 1,85Kg oo keliya, af-hayeenkan yar wuxuu awood u leeyahay inuu na siiyo cod tayo leh oo in yar oo ka mid ah qiimihiisu u dhigmi karo mahadnaqa labadiisa darajo ee D-ga ah. hadlaya. Naqshadeynta waa astaamaha Sonos, oo leh laba dhammeystiran oo la heli karo (madow iyo caddaan) iyo muuqaal casri ah iyo mid yar taas oo hadhuudhka afku ku fadhiyo ku dhowaad dhammaan dusha sare. Xagga sare waxaa ku yaal kontaroolada taabashada, oo aan lahayn badhamooyin jireed, oo kuu oggolaan doona inaad bilowdo ama joojiso ciyaarista, ka bood heesta oo xakameyso mugga, dhammaan tilmaamaha ku yaal daboolka kore ee afhayeenka.
Dusha sare waxaan sidoo kale ka helaynaa makarafoonka oo leh Laydh noo sheegaya goorta uu shaqeynayo, iyo in aan shaqeyn karno markii aan dooneyno haddii asturnaanta qalabkani ay yihiin wax aan ka walwalno. Markay kaaliyeyaasha codku yimaadaan Sonos One, makarafoonkan ayaa noo oggolaanaya inaan xakameyno dib u soo celinta adigoon taaban gudoomiyaha, marka lagu daro shaqooyinka kale ee kaaliyayaashan dalwaddii ah. Laakiin taasi hadda waa wax ku sugi doona Spain iyo waddamada kale ee ku hadla Isbaanishka.
Sida ku xirnaanta Sonos ku hadla, sharad shirkadu way cadahay waqti dheer: WiFi. Dhawaaqa ugu tayada sareeya iyo isku xirka iyo isku xirka balaadhinta ugu badan ee suurtogalka ah. Haddii aad rabto ku hadla Bluetooth, Sonos maahan astaantaada. Moodelkan kuma jiraan noocyo kale oo xiriir ah oo maqal ah, midkoodna Jack iyo fiilada indhaha, dhammaan dhawaqa gaadha af-hayeenka wuxuu noqon doonaa shabakadda WiFi ee gurigaaga. Kaliya wuxuu la jaan qaadi karaa shabakadaha 2,4GHz, kuwaas oo ah kuwa leh kuwa ugu ballaaran, sidaa darteed in kasta oo ay ka maqan tahay in qeexitaannada ay ka mid yihiin kooxda 5GHz, ficil ahaan wax dhib ah ma leh.
Dhabarka gadaashiisa waxaan ka heleynaa badhanka kaliya ee muuqaalka qalabka, oo aad u adeegsan doonto inaad ku xirto shabakadaada WiFi, hanaan aad u fudud oo lagu fuliyo mahadnaqa barnaamijka Sonos Controller ee aad ka heli karto App Store (isku xirka) taasina waxay la shaqeysaa labadaada ipad iyo iphone. Sidoo kale xiriir Ethernet ah, haddii aad rabto inaad isticmaasho fiilada halkii aad ka isticmaali lahayd WiFi, waa "godka" kaliya ee aad ka heli doontid inaad dhigto fiilo, marka laga reebo fiilada korantada ee muuqata ee ku xirmeysa salka afhayeenka. Siyaasaddan isku xirnaanta kooban dad badan ma soo dhaweynayaan, laakiin shaqsiyan waan jeclahay, runti xitaa waxaan dhihi lahaa fiilada Ethernet ayaa haray.
Ka xakamee taleefankaaga casriga ah
Fikradda Sonos ayaa ah inaad ka xakameyso dib u soo celinta qalabkaaga moobaylka, taas oo ku jirta inta badan kiisaska isha muusigga aan maanta ku raaxaysanayno. Tan awgeed waxaan haynaa barnaamijka Sonos Controller oo noo ogolaanaya inaan laamiro sax ah la sameyno kuwa ku hadla. Waxay ku dhexjiraan ficil ahaan dhammaan adeegyada muusikada ee aad ka heli karto adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan Spotify iyo Apple Music. Haddii aad rabto, xitaa waad isticmaali kartaa arjiga si aad isugu keento dhammaan adeegyadaada hal barnaamij, isla markaana aad u sameysato liisas muusig hal dhinac uga socda.
Barnaamijku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xakameyso dib uqabashada dhowr kuhadal, oo leh isla muusig dhammaantood, abuurista kooxo, ama midba midka kale muusig, waad go'aansaneysaa. Dabcan sidoo kale waad xakamayn kartaa ciyaarta loo yaqaan 'Apple Music' ama 'Spotify application', ama wax kale, taas oo ay ugu wacan tahay is waafajinta AirPlay 2, markaa wax dhibaato ah kuma lahaan doontid haddii aad rabto inaad sii wadato adeegsiga barnaamijka rasmiga ah ee adeegga muusigga ee aad ugu jeceshahay. AirPlay 2 sidoo kale waxay kuu keenaysaa iswaafajin Siri ah, adigoo awood u leh inaad adeegsato kaaliyaha dalwaddii Apple ah si loo xakameeyo loo maqli karo muusikada aad dooratay ee ku hadla afhayeenka guriga. Waxay u egtahay inaad leedahay HomePod, inkasta oo amarradu ay noqon doonaan in lagu siiyo qalabkaaga Siri, oo aan toos loogula hadlin kuwa hadlaya.
Tayada oo ah sumadda guriga
Looma baahna in lagu nuuxnuuxsado tayada Sonos iyo wax soo saarkeeda, xagga naqshadaynta, agabka iyo dhammaystirka iyo dhawaaqa ay soo saaraanba. Sida la ogaan karo, Sonos One ayaa ka hooseeya awoodda iyo tayada alaabooyinka kale ee sumadda, maxaa yeelay taasi waa kuwa ugu la awoodi karo, laakiin ha qaldamin, maxaa yeelay dhawaqoodu aad buu u wanaagsan yahay. Sanadahan oo dhan waxaan awooday inaan tijaabiyo Sonos Play: 3 (isku xirka) iyo dhowaan Sonos Play: 5 (isku xirka), alaabooyinka ka sarreeya tayada codka iyo qiimaha ka ciyaara horyaal kale, sida HomePod, oo aan sidoo kale ku daabacnay dib u eegis barta (isku xirka).
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira hal muuqaal oo Sonos ah oo Sonos One ka faa'iideysanaya: modularity. Waad iibsan kartaa labo Sonos One ah oo aad isla xiriiri kartaa si aad u noqotid hal ku hadla, tayada iyo awoodda dhawaaquna way tarmaysaa. Sonos One lammaane ayaa ah heerka HomePod, Dhageysigeygu maahan mid aad ufiican oo aan awood ugu yeesho inaan go'aansado midka fiican. Faa'iidada weyn ee ikhtiyaari istirisho ayaa ah inaad heli karto markasta oo aad rabto adoo iibsanaya cutub kale hadhow, uma baahnid inaad iibsato labada afhayeen isla waqtigaas. Sidoo kale waa geedi socod la rogi karo waqti kasta.
Qaarkood xitaa waxay tixgeliyaan iyaga oo u isticmaalaya sidii HomeCinema, iyadoo la dhigayo Sonos dhinac kasta oo TV-ga ah. Doorashadan iguma muuqato inay tahay mid si gaar ah cajiib ugu ah kuwan hadlaya, in kasta oo aan isku dayay oo natiijada si farxad leh iiga yaabisay. Si kastaba ha noqotee, looma qorsheynin ujeedkan oo sidaas darteed ma laha HDMI ama isku xirnaanta indhaha. Waa la isticmaali karaa? Dabcan, waad ka faa'iideysan kartaa xaqiiqda ah inaad iyaga dhigtay qolka fadhiga si aad sidoo kale ugu isticmaasho inay tahay nidaam maqal ah oo telefishankaaga ah, laakiin tani waa wax iska caadi ah oo aan ahayn hawl lafteeda ah. Sonos waxay leedahay ikhtiyaarro aad ugu habboon oo ku siin doona natiijooyin wanaagsan.
Haddii waxa aad raadineysaa ay yihiin kuwa si fudud ugu hadla AirPlay, waxaad haysataa ikhtiyaarro badan oo la awoodi karo, laakiin haddii aad rabto afhayeen tayo leh, oo la jaan qaadaya AirPlay 2, kaas oo dhawaan yeelan doona kaaliyeyaal kale oo dalwad leh oo isku dhafan sida Kaaliyaha Google ama Alexa, oo waliba leh suurtagalnimada in la abuuro nidaam cod guriga oo dhan iyadoo lagu darayo ku hadlayaal badan, markaa Sonos One kan ayaa ah waxa aad raadineyso. Iyada oo hal kuhadle ah (oo aad uga fiican laba) waxaad ku raaxeysan kartaa muusikadaada oo aad ugu mahadcelineysaa AirPlay 2 xitaa waxaad ku xakameyneysaa Siri. Adiguna sidoo kale waxaad dhexgalin kartaa adeegga qulqulka ee aad dooratay barnaamijkaaga. Waa, shaki la'aan, gabi ahaanba lagu taliyay iibsashada muusikada jecel kaliya € 229 gudaha.
Tayo iyo naqshad tayo leh
La jaan qaadaya AirPlay 2 iyo Siri
Codsi isku dhafan dhammaan adeegyada muusikada
Kaliya isku xirka WiFi ama Ethernet
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Sonos One dib u eegis ku hadla, caqli badan lehna AirPlay 2
Waxaan haystaa Ciyaar: 1 waxaanan ka fikirayay sidii aan mid u iibsan lahaa in muddo ah.
Waxaan fahansanahay in codsiga Sonos aadan isku lammaami karin si aad u abuurto Stereo laakiin waad ku dhex mari kartaa Airplay 2 maadaama sida ku cad bogga Sonos, adoo wata qalab la jaan qaadaya Airplay 2, waad wada maamuli kartaa.
Muhiimadu waxay tahay anigu kama heli karo macluumaad dheeri ah ama maqaalo dad isku dayay tan taasna waxay igu kalifaysaa shaki badan.
Maqaal wanaagsan habka.
Ku jawaab Aritz
Waan aqriyay si lamid ah adiguba, markaan kudarto aalad iskuwaacisa inta kale ee isla shabakada sidoo kale way iswaafajin karaan, laakiin ma awoodin inaan xaqiijiyo maadaama aanan haysan qalab duug ah, raali ahow.
IPhone XS-kaaga ayaan wax lacag ah kaa qaadi doonin marka la xidho? Isticmaalayaasha qaar waxay bilaabaan inay cabtaan
Apple wuxuu iftiiminayaa shaashadda iPhone XS iyo XS Max ee xayeysiiskeeda cusub